Amin’ny 7 novambra ny fifidianana: mametra-pialana ny 7 septambra ny filoha | NewsMada
“Tsy azo lalaovina ny raharaham-pirenena, ary sy maintsy raisina ny hevitry ny besinimaro. Lazaiko fa tsy maintsy miroso amin’ny fifidianana isika. Hany no lalana hahazoantsika mamaha ny olana na ny krizy politika amin’izao fotoana izao izany.”, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian. Nankatoavin’ny Antenimiera roa tonta ny fandaharanasan’ny governemanta na ny politika ankapoben’ny fanjakana (PGE). Midika izany fa laharam-pahamehana ny fifidianana. “Manao antso avo ny tenako mba ho lalana iray hanamafisantsika ny fitoniana politika izany fanolorana ny daty izany ary indrindra hirosoantsika amin’ny tena tokony ho izy amin’ny lalan’ny fifidianana hahazoantsika mamaha ny olana”, hoy izy.